Sone Lin - Page 293 of 293 - News,Knowledge and Entertainment
Local News, Video November 16, 2020
မွနျမာပွညျအတှကျ အတိတျကောငျး နိမိတျကောငျးတှေ ရောကျလာပွီ (ရုပျသံ)
မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အတိတ်ကောင်း နိမိတ်ကောင်းတွေပါပဲ…ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဖြူးမြို့နယ် အရှေ့ဘက် အုတ်ဖြတ်အုပ်စု ရင်တိုက်စိန်းကျေးရွာတွင် တည်ထားကိုးကွယ်ထားသော… စေတီတော်မြတ်မှ ရောင်ခြည်တော်များ ကွန့်မြူးနေပုံ ဖြစ်ပါသည် အားလုံးဖူးမျှော်နိုင်ရန် တင်ပေးလိုက်ပါသည်…. လိုင်းဖွင့်ချိန်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရင် သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ကာ…မျှဝေလိုက်ပါအားလုံး ကပ်ရောဂါကြီးမှ အမြန်ဆုံး ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေ… ………… မွနျမာပွညျကွီးအတှကျ အတိတျကောငျး နိမိတျကောငျးတှပေါပဲ…ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး ဖွူးမွို့နယျ အရှဘေ့ကျ အုတျဖွတျအုပျစု ရငျတိုကျစိနျးကြေးရှာတှငျ တညျထားကိုးကှယျထားသော… စတေီတျောမွတျမှ ရောငျခွညျတျောမြား ကှနျ့မွူးနပေုံ ဖွဈပါသညျ အားလုံးဖူးမြှျောနိုငျရနျ တငျပေးလိုကျပါသညျ…. လိုငျးဖှငျ့ခြိနျနဲ့ဆုံတှခေဲ့ရငျ…
Local News November 15, 2020
ကိုရငျလေးတဈပါး ပူဇျောထားသော ဘုရားဆငျးတုတျောလေးအား မွှဟေောကျတဈကောငျမှ ပါးပဉျြးမိုး၍ လာရောကျပူဇျော
ထူးဆန်းလိုက်တာ ကိုရင်လေးတစ်ပါး ပူဇော်ထားသော ဘုရားဆင်းတုတော်လေး အား မြွေဟောက်တစ်ကောင်မှ ပါးပျဉ်းမိုး၍ လာရောက်ပူဇော်ခြင်း ​ဖူးမြင်ရသူတိုင်း ကံကောင်းခြင်းတွေ ရရှိပါစေ 🙏🙏🙏 ——————- ထူးဆနျးလိုကျတာ ကိုရငျလေးတဈပါး ပူဇျောထားသော ဘုရားဆငျးတုတျောလေး အား မွှဟေောကျတဈကောငျမှ ပါးပဉျြးမိုး၍ လာရောကျပူဇျောခွငျး ဖူးမွငျရသူတိုငျး ကံကောငျးခွငျးတှေ ရရှိပါစေ 🙏🙏🙏
လှိုငျသာယာ ရှလေငျဗနျးကြေးရှာတှငျ ထောကျပံ့ကွေးမရသူမြား အုပျခြုပျရေးမှူးတှငျ စုဝေးမှုဖွဈနေ
လှိုင်သာယာမြို့နယ် ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာတွင် နိုင်ငံတော် ထောက်ပံ့ကြေးမရသူများ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွင် စုဝဲမှု ဖြစ်နေ လှိုင်သာယာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၅/၂၀၂၀ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာ၌ နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့ကြေး ၄၀၀၀၀ကျပ် မရသူများက ရပ်ကွက်အုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့တွင် ယနေ့ နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီမှစတင်၍ ယခုချိန်ထိ လူစုလူဝဲ ဖြစ်ပွားနေသည်။ လှိုငျသာယာမွို့နယျ ရှလေငျဗနျးကြေးရှာတှငျ နိုငျငံတျော ထောကျပံ့ကွေးမရသူမြား အုပျခြုပျရေးမှူးတှငျ စုဝဲမှု ဖွဈနေ လှိုငျသာယာ၊ နိုဝငျဘာ ၁၅/၂၀၂၀ လှိုငျသာယာ(အရှပေို့ငျး)မွို့နယျ၊…
လူလိုလို သရဲလိုလို မိနျးခလေးရှိတဲ့ အိမျတှပေျေါ တကျတတျတဲ့ဟင်ျသာတက နံမညျကွီးနတေဲ့ ကတုံး
ဟင်္သာတမြို့ သော်တာအေးရပ်ကွက်ထဲမှာ ညဘက်ဆို လူတွေဒုတ်ဓါးလက်နက်တွေကိုင်ပြီး ကင်းစောင့်နေကြရတာ ဒီညဆို ၄ ရက်ရှိပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ပြောဆိုမှုအရ ကတုံးနဲ့ လူလိုလို သရဲလိုလို တစ်ယောက်က မိန်းခလေးတွေ ရှိတဲ့ အိမ်တွေပေါ် တက်တယ် ၊ လူတွေ့လို့ ဝိုင်းလိုက်ရင် ပျောက်သွားတယ်ဆိုပြီး ထိတ်လန့်နေကြတာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စက သက်သေပြဖို့ ခက်ခဲနေပြီး Delta News Agency က သူတက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အိမ်ကို လိုက်စုံစမ်းရာမှာ…
Cele News November 14, 2020
မိသားစု စုံစုံလငျလငျနဲ့ ပြျောရှငျစှာ ငါးစာသှားကြှေးခဲ့ကွတဲ့ ပိုးအိအိခနျ့တို့မိသားစု
ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် အဆိုတော် ပိုးအိအိခန့်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား အောင်သူနဲ့ လက်ထပ်ကာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေး သဲကိုးလေးနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ပိုးအိအိခန့်ကတော့ သားဖြစ်သူ သဲကိုးလေးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တစ်နေ့တစ်မျိုးတင်ကာ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်လို့ ပြောရင်မှား မယ်…
Knowledge November 9, 2020
မဲရုံစောင့်တဲ့ ဆရာမလေး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ရပ် အခုလေးတင်ဖစ်လိုက်တာပါ ညီမကဒီနေ့မဲရုံစောင့်ရပါတယ် မဲရေတာကြာသွားလို့  ည ၁၀ နာရီလောက်ထိမပြန်ရပါဘူး မူလတန်းကျောင်းမာစောင့်ရတာပေါ့နော် အဲ့မာ ကျောင်းအိမ်သာတေကနမည်တွေကြီးတော့ ညီမလဲပါးစပ်ကလွှတ်ခနဲ “ဒီချိန် အိမ်သာသွားမလား သေမလားဆို ငါသေပဲသေလိုက်မာ သရဲကြောက်တယ်ဘာညာ”နဲ့ပြောနေတုန်း အမဖစ်သူက အိမ်သာသွားချင်တယ်ဆိုလို့ လိုက်သွားပေးရာက စဖစ်တာပါ အိမ်သာက ၄လုံး၂တွဲ ရှိတာ တဖက်ကအသစ် တဖက်က ပျက်စီးယိုယွင်းမှောင်မဲနေတာပေါ့ အ့မာ အိမ်သာအသစ်မာက မီးလင်းနေတာ တံခါးတေလဲပွင့်…
Cele News November 8, 2020
ရှုံးရှုံးနိုငျနိုငျ တညျငွိမျရမယျဆိုတဲ့ အမစေုရဲ့စကားကိုနားထောငျကွဖို့သတိပေးစကားဆိုခဲ့တဲ့ ဒါရိုကျတာ ဝိုငျး
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်နေ့မှာတော့ နိုင်ငံသားတိုင်း တာဝန်ကျေပွန်စွာမဲပေးခဲ့ကြပြီထင်ပါတယ် ။ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ ပါတီကို မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး မဲရလဒ်အဖြေကို ရင်ခုန်စွာစောင့်မျှော်နေလောက်ပါပြီ ။ သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းတစ်ယောက်ကလည်း နိုင်ငံသားတစ်ယောက်တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ပြီးနောက်မှာ အမေစုရဲ့စကားကို မမေ့လျော့ကြဖို့သတိပေးစကားဆိုလာခဲ့ပါတယ် ။ ဘော်ဘော်တို့…ရင်ခုန်နေပီမလား…YMBAမဲရုံထဲကို စိုးရိမ်ရင်ခုန်စွာနဲ့ဝင်သွားခဲ့တယ်..တဖြည်းဖြည်းနဲ့….အားနာလာတယ်…အပြတ်အသတ်ကွာနေတာကိုး…ပုဇွန်တောင်.. မဲရုံတွေကတော့….နိုင်ဖို့သေချာသလောက်ဖြစ်နေပါပီ…ပျော်ကြတယ်…ဟုတ်..တခုတော့..သတိပေးချင်ပါတယ်..အမေစုကမှာထားတယ်. နော်ရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်တည်ငြိမ်ရမယ်…တဲ့… မဲသတင်းတွေက..အိမ်ကနေပဲ..နားထောင်ကြပါ.. ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့အမေစုရဲ့ စကားကို မမေ့လျော့ကြဖို့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ တချို့ပရိသတ်တွေကတော့ ဒါရိုက်တာဝိုင်းနဲ့ထပ်တူ NLD…
ကွားသိရသမြှ January 1, 2020
မွနျမာပွညျမှာ လှတာမကျလို့ မရတော့ပါဘူး [ကမ်ဘာ့အဆငျ့(၁)ကို တကျလှမျးနတေဲ့ ဆငျဆာဖွဈနှုနျး]
ပွောခငျြနတောအဲ့ဒါပဲ။လူ့လောကမှာလဲ လှ တာကိုဘဲ မကျနကွေတာဆိုတော့ မနကျစောစော မှာ သတငျးတခု ရောကျလာပါတယျ ။ ကနြေျာ့ မိတျဆှေ ကွီး ရဲ့ နောကျဆုံးအခြိနျ ကို စောငျ့နကွေ ပွီတဲ့ ။ရောဂါက အသညျးကငျဆာ ။ အသကျက ၅၅ နှဈ။ခတျေပညာတတျ အရာရှိကွီး ။ အရကျမသောကျဆေးလိပျမသောကျ ။ကနျြးမာရေး လိုကျစားသူ ။အစားကောငျး တှေ သိပျကွိုကျသူ ။ နိူငျငံတကာကို လှညျ့သှားနေ ပမေယျ့…